Apple waxay u cusboonaysiisaa firmware-ka AirTag qaab weji leh | IPhone News
Apple waxay cusbooneysiisaa AirTag firmware si isdabajoog ah
Tony Cortes | 28/04/2022 22:46 | Qalabka IPhone
Maanta oo Khamiis ah, waa cusub nooca firmware AirTag cusub. Sida caadiga ah ee shirkadda, ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan warka cusub ee uu keeno. Iyada oo leh AirTags, cusbooneysiin kasta waa qarsoodi.
Iyo arrin kale oo "daahsoon" waa habka loo cusbooneysiin doono. si tartiib tartiib ah. waxay maanta u bilaabataa cutubyada qaar, waxayna dhamaan doontaa May 13, iyadoo 100% qalabka la cusboonaysiiyay. Markaa ha werwerin, AirTags-kaagana wuu dhici doonaa mar kasta...
Dhowr saacadood ka hor, Apple waxay soo saartay cusbooneysiin cusub oo firmware ah AirTag. Markaa maalmaha soo socda waxaan ka bixi doonaa inaan haysano nooca hadda 1.0.291 ilaa kan cusub 1.0.301. Ka digtoonow inaan idhi "maalmaha soo socda".
Sida caadiga ah cusboonaysiinta Apple trackers, kuwa ka socda Cupertino badanaa naguma wargeliyaan warka ay ku daraan qoraaladooda caadiga ah ee ku saabsan cusbooneysiinta, sida kiiska inta badan aaladaha shirkadda. Markaa hal mar oo kale waanu ka tagaynaa anagoon garanaynin waxa hagaajinta ay ku jirto nuqulkan cusub.
Oo wakhtigan, update waxaa loo fulin doonaa si tartiib tartiib ah dhammaan qalabyada meeraha. AppleSWupdates tilmaamayo akoonkaaga Twitter in firmware-ka cusub uu gaari doono boqolkiiba hal isticmaalayaasha markii ugu horeysay maanta. Waxay gaari doontaa boqolkiiba 3 isticmaalayaasha Maajo 25 iyo 9 boqolkiiba Maajo 13. Daah-furku waa inuu ahaadaa mid u dhammaystiran dhammaan qaybaha hawlgelinta Maajo XNUMX.
Taas macnaheedu waa haddii raadraacayaashaadu ay hore ugu jireen nooca 1.0.301, waxay mar horeba ka wadaan software-kii ugu dambeeyay ee Apple. Haddii kale, ha quusan ugu dambayn May 13 waa inaad hore u sii haysaa iyaga oo casri ah.
Mararka qaarkood Apple waxay u isticmaashaa nidaamka cusboonaysiinta qalabkan si isdaba joog ah. Ma samaynayso, aad uga yar si aanay u buuxin server-keeda, maadaama cabbirka AirTags firmware uu yahay wax lagu qoslo haddii aan la barbar dhigno cusboonaysiinta caadiga ah ee iPhone ama iPad, oo hadda kama hadlayno Mac.
Iyadoo habkan cusbooneysiin tartiib ah, Apple waxay si dhakhso ah uga jawaabi kartaa oo riixi kartaa cusboonaysiinta dhibaatada ka hor inta aysan gaarin dhammaan darawallada. Markaa waanu dulqaadan doonaa, oo waxaan sugi doonaa dhawr maalmood si aan u aragno haddii raadraacayaashayada la cusboonaysiiyay.
Sida loo hubiyo in AirTag-keena la cusboonaysiiyay
Si la mid ah in ay dhacdo la AirPods, Apple kuma ogola inaad "ku qasbi" qalabkaaga si aad u cusbooneysiiso. Kaliya ku hay meel u dhow iPhone kaaga, oo sug inta cusbooneysiinta si toos ah u dhacayso.
Waxa aad samayn karto waa in aad aragto haddii ay hore u samaysay, hab aad u fudud. Ka fur Find My app on your iPhone, iPad, ama Mac. Dooro tab ku calaamadsan "walxaha." Dooro Airtag taas oo aad rabto inaad aragto faahfaahin dheeraad ah. Taabo astaanta batteriga ee ka hooseeya magaca AirTag waxaana la soo bandhigi doonaa lambarka taxanaha iyo nooca firmware-ka. Taasi waxay tidhi, waxaad arki doontaa firmware-ka cusub 1.0.301 ka hor May 13. Hadda, tayda lama cusbooneysiinin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Apple waxay cusbooneysiisaa AirTag firmware si isdabajoog ah
Aqara waxay ku cusboonaysiisaa dareeraha dhaqdhaqaaqa iyada oo leh madax-bannaani iyo dareen weyn